HomeAfaan OromooNewsIbsa labsii gumii abbootii gadaa oromiyaa ilaalichisee ibsa waraanaa Bilisummaa oromoo irraa
Sawud Arabiyaan Allaa Muddiin irraa qarshii biliyoona sagal 9 irraa fudhattee biliyoona tokko (1)qofaa hanbisteettif
Arraarri hamma fedhe yoo dhufeyyuu WBOn yoo tole hidhanno jabeessuufii malee hiikkachiisuunn dogoggora seenaa ti! Otoo WBO cimaa qabaannee ilmaan halagaa biyyaa fagootii dhuftee saba keenya manuma isaa keessati hinsalphiftu! WBOn qaama addaa kan Oromia fi oromo qofa tiksu ta’e beekkamtii addaa argachuu qaba malee diigamuu hinqabu! RIB Ithiopia seenaadhuma issaatii kaasee diina Oromo isa 1fa dha malee Oromo tiksee hinbeeku! Otoo RIB Ethipia jiru sbani keenya millionaan qeyee abba isaa irraa buqa’ee, inni dhumee, inni kaan biyyaa baye. Hammallee RIB Oromo fixaa jira. Kanaafuu Oromoon yoomillee RIBti of gatee eboo ofii isa dheera cabsuu hinqabu. Galatoomaa